यी १० नेपाली सेलिब्रेटी जो विश्वकै नागरिकहरुलेपनि सजिलै चिन्छन !को को परे भाग्यमानि ?(भिडियोनै हेर्नुहोस) – Complete Nepali News Portal
ड्रिम गर्ल को होलिन ? नेपाली परिवेश अनुसार हेर्ने हो भनें भ्यालेन्टाइन ड्रिम गर्ल को होलिन त ? यो विषयमा फरक व्यक्तिका फरक मत हुनसक्छन् । कसैले आफ्नै प्रेमिका वा श्रीमतीलाई सम्झेलान्, तर त्यो भन्दा बाहिर निस्किएर सोच्दा कल्पनाको त्यो राजकुमारी को होला त ? टप टेन ड्रिम गर्लको खोजीलाई प्रणय दिवसको अवसर पारेर अगाडी बढाइएको थियो । विभिन्न पेशा र क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्तित्वहरुमाझ ड्रिम गर्ल सर्चको अभियान लिएर पुग्यौं हामी । ड्रिम गर्लको रुपमा ति व्यक्तित्वहरुले आफ्नो मनमा सजाएका युवतीहरुको नाम जान्ने चासो थियो केन्द्रविन्दु टेलिभिजनको । मुलत ग्लामर उद्योगमा ड्रिम गर्लको बारेमा प्रशस्त चासो र चर्चा हुने गर्छ ।
आजको राशिफल फागुन १७ गते सोमबार
लोकप्रिय हास्य टेलिशृंखला ‘हर्के हल्दार” अब देखि आइतबार राति ९...
इतिहास रच्दै महान श्रीमान बिनोद र अनिताको पहिलो गीतले, १३...
सामाजिक अभियान्ता शरिन तामाङको उदाहरनिय कदम, महिलासँगै यसरी लगनगाँठो कसिन्...